Tsofa HSS lavaka, tsofa lavaka vy, tsofa loaka vy, fantsom-pandrefesana vy haingam-pandeha haingam-pandeha, fantsom-pitrandrahana vy misy vy sy mpanamboatra | Boda
HSS loaka, tsofa loaka vy, tsofa loaka vy, fantsom-borosy vy haingam-pandeha haingam-pandeha, tsofa fantsom-by
BOSENDA HSS Hole Saws / HSS Hole Opener dia mitazona fanoherana mahery vaika amin'ny fiasa, miaraka amin'ny lelany maranitra, famoahana malefaka ary fandidiana mora. BOSENDA HSS Hole Saws dia natao ho an'ny mpampiasa.
Mandritra ny fizotran'ny asa, ny nify maranitra sy ny hovitrovitra kely izay afaka mandanjalanja amin'ny fomba mahomby rehefa mihady lavaka ary mampiato ny fandidiana. Ny endriny vaovao amin'ny alàlan'ny fanesorana puce dia afaka manala ny famafazana vy haingana ary mahatonga ny asa ho malama kokoa. mahazaka mahomby manakana ny solafaka.
HSS Hole Saws dia afaka miasa toy ny varotra lavaka aluminium, tsofa loaka vy, fantsom-by vy plastika henjana, miasa mahomby sy mety izy. BOSENDA HSS Hole Saws mampiasa fitaovana avo lenta, mety amin'ny vy tsy misy fangarony, lovia firaka, lovia vy mafy, manify takelaka vy, takelaka vy SMD, varavarana aluminium, taratasy vy, firaka aliminioma, vy tsy mahazatra, karazana fanokafana fantsona rehetra ary fitrandrahana fitaovana vy hafa.
Ny tsofa loaka HSS / fantsona HSS dia manana famolavolana hazavana hexagonal, 12-100 mm azo namboarina, ny ampahany amin'ny sisin'ny nify dia manosihosy amin'ny alàlan'ny fanondroana an-tsoratra ny fitaovana milina CNC; raha vao niforona dia maranitra ny mponina ary avo ny marin-toerana; aorian'ny fitsaboana hafanana tsy misy dikany, ny henjana sy hamafin'ny mpanokatra dia mahafeno ny fepetra takiana asa tena tsara.
HSS Hole Saw dia ampiasaina amin'ny fandavahana amin'ny dabilio, fandoroana pistola, fandefasana herinaratra stereo ary milina lathe.
Mandritra ny fizotran'ny asa, ny fampidirana rano na coolant dia hahatonga ny asa hahomby kokoa sy ho tsara kokoa ary koa hanalava ny androm-piainan'ny vokatra. Rehefa apetraka ao anaty fandavahana ilay mpanokatra ny lavaka dia mila mifamatotra mafy amin'ireo fitaovana enti-miasa ny tarehy telo amin'ny famitana mifanaraka amin'izany. Mandritra ny fizotran'ny asa, raha misy tsy fetezana na tsy mety ny fanesorana puce dia atsaharo aloha ny asa, esory ny poti-fako dia manohy miasa indray.
BOSENDA HSS Hole Saws habe dia toy ny eto ambany:
12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 18.5mm, 19mm, 20mm, 20.5mm, 21mm, 21.5mm, 22mm, 22.5mm, 23mm, 24mm, 25mm, 25.5mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm , 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 42mm, 45mm, 48mm, 50mm, 53mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, 23.5mm, 19.5mm, Center Drill miaraka amin'ny 5 * 40 (manokana ho an'ny 12-32MM), ary fandavahana afovoany 6 * 40 (manokana ho an'ny 35-100mm).
Previous: Sitrana ny lavaka granit, tsofa lavaka marbra voadio, tsofa lavaka vato, lohan'ny fanapahana firavaka diamondra, tsofa lavaka, famolahana marbra, fandoroana beton
Manaraka: Tsofa loaka, fantsakan-lavaka, tsofa vy vy, fitrandrahana karbida simenitra, tsofa lozika vita amin'ny vy vita amin'ny vy vy UNIKA
Sitroka lavaka beton, bitsika fandavahana fototra, tsofa lavaka, wal ...